18*55 ft ရှယ်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်းအရောင်း – Nay Chi & Lamin Myanmar Real Estate
18*55 ft ရှယ်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်းအရောင်း
Post Updated: 2022-03-11 09:54:42
ပြင်ဆင်မှု-သံပန်းဆန်းရှိတ်ပတ်ပတ်လည်တပ်ဆင်ပြီး ဝရံတာကြွေပြားခင်းပြီး /ဧည့်ခန်းအတွင်းကိုရီးယားပါကေးခင်းပြီး မီးအလှနင့်ပလာစတာကောနစ်တပ်ဆင်ပြီး မီးဖိုခန်းအခင်းကြွေပြားကပ်ပြီး/ရေချိူးခန်းအုတ်ကန်ဖွဲ့ပြီး ဘိုထိုင်အိမ်သာပါရှိပါသည်။
စိတ်ဝင်စား၍ ကြည့်ရှု့လိုပါက ၂နာရီကြိုတင်၍ Ph ဆက်ချိန်းပေးပါရန် !
လူကြီးမင်းတို့၏ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးခြင်းအိမ်၊ မြေကွက်များကို
အချက်အလက်ဓာတ်ပုံများပေးပို့၍ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ
Full tile floor toilet & bath room
Tile floor at Kitchen room
This Apartment style property is located in is currently For sale and has been listed on Nay Chi & Lamin Myanmar Real Estate. This property is listed at Lakhs 540.00. It has bedrooms, 1 bath bathrooms, and is 990 sq ft. The property was built in year.